ညီကိုလို ခငျခဲ့ရတဲ့ စကစ ဗိုလျကွီးတဈဦးက “တကယျလို့မြား အဈကိုနဲ့ကနြျော တိုကျပှဲတှကွေားမှာ ထိပျတိုကျတှခေဲ့ကွရငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ”တဲ့..? – Shwe Yaung Media
ညီကိုလို ခငျခဲ့ရတဲ့ စကစ ဗိုလျကွီးတဈဦးက “တကယျလို့မြား အဈကိုနဲ့ကနြျော တိုကျပှဲတှကွေားမှာ ထိပျတိုကျတှခေဲ့ကွရငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ”တဲ့..?
အရငျတုနျးက အိမျနီးခငျြးဖွဈခဲ့ကွပွီး ကနြေျာ့အပျေါမှာလညျး အဈကိုတဈယောကျလို လေးစားခဲ့တဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ အခုတော့ စကစမှာ စဈဗိုလျကွီး ဖွဈနခေဲ့ပါပွီ (ညီအဈကိုအရငျးတှလေို နခေဲ့ကွတာပါ )
သူက..ကနြျောရေးတငျနတေဲ့ ပို့ဈတှကေို ဘယျလိုဝငျဖတျနသေလဲ ဆိုတာကိုတော့.. ကနြျောလညျး အသအေခြာမသိပါဘူး (အာဏာသိမျးခံရအပွီး တဈလလောကျအကွာမှာ သူ့အကောငျ့ကို block ပဈခဲ့တယျ) ကနြျောကိုယျတိုငျကလညျး ပွဿနာတဈခုကွောငျ့
အကောငျ့ပွောငျးသုံးပွီး ကိုယျယောငျဖြောကျနခေဲ့ရပါတယျ ဒီအကောငျ့ကို ကနြျောသုံးနမှေနျး သူဘယျက ဘယျလိုသိသှားခဲ့သလဲဆိုတော့ ကနြေျာ့ရဲ့ ပငျကိုယျအရေးအသားတှကွေောငျ့ပါ လို့ သူက ပွောပွလာပါတယျ။
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စာရေးပုံရေးနညျးကှဲပွားလို့ ဖတျကွညျ့တာနဲ့တနျးသိပါတယျ တဲ့လေ.. ထားပါတော့ သူက ကနြေျာ့ကိုမေးလာပါတယျ (ဖုနျးတော့မဆကျပါဘူး မကျဆပေို့ပွီးမေးတာပါ)
“စဈတပျကွီးကို အဲ့လောကျတောငျမုနျးတီးနတောလား” တဲ့ ။ပွနျဖွပေေးလိုကျပါတယျ “ငါ မုနျးတာစဈတပျကွီးကိုမဟုတျပါဘူး.. ကိုယျ့အတ်တတဈခုတညျးကို ရှတေ့နျးတငျပွီး အာဏာသိမျးခဲ့ကွတဲ့ အာဏာရူးတဈသိုကျ နဲ့
အဲ့ဒီ့ အာဏာရူးတှခေိုငျးသမြှကို မှားသလား.. မှနျသလားဆိုတာ မစဉျးစား/မသုံးသပျပဲ လုပျပေးနကွေတဲ့ ကြှနျသဘောကျကောငျတှကေိုပါ” လို့ သူက ဆကျပွီး မေးပါသေးတယျ “အဈကို အရငျကနိုငျငံရေးတှစေိတျမဝငျစားပါဘူး.. အခုမှ ဘယျလိုဖွဈပွီး NLD ဘကျတျောသားဖွဈသှားခဲ့တာလဲ” တဲ့..?
အရငျကခငျမငျခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉျလကျကနျြလေး နဲ့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျပဲ ပွနျဖွခေဲ့လိုကျပါတယျ အရငျကတညျးက ဘယျပါတီကိုမှ ထူးထူးခွားခွားကွီးမထောကျခံခဲ့ဖူးပါဘူး အခုဖွဈနတေဲ့ကိစ်စကွီးက ပါတီစှဲပွဿနာကွီးလညျး မဟုတျပါဘူး
ဒါဟာ “ဓမ်မနဲ့ အဓမ်မကွားက တိုကျပှဲကွီးတဈခုပါ” လို့ နောကျဆုံးအနနေဲ့ သူ မေးတာကတော့ “တကယျလို့မြား အဈကိုနဲ့ကနြျော တိုကျပှဲတှကွေားမှာ ထိပျတိုကျတှခေဲ့ကွရငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ”တဲ့ အဲ့မေးခှနျူကို စဉျးစားစရာမလိုဘဲ မဆိုငျးမတှ ပွနျဖွပေေးလိုကျနိုငျပါတယျ
“မငျးလုပျစရာရှိတာကို မငျးလုပျ ငါလုပျစရာရှိတာကို ငါလုပျမယျ လို့၊ နောငျတဈခြိနျမှာ မငျးဖွဈဖွဈငါဖွဈဖွဈ မသဘေဲ ကနျြနခေဲ့မယျ ဆိုရငျတောငျ ငါ့အနနေဲ့ကတော့ ငါလုပျခဲ့တဲ့ အလုပျအတှကျ ငါရပျတညျခဲ့တဲ့ လမျးအတှကျ “ဝမျးနညျးနမှော မဟုတျသလို နောငျတ ရစရာလညျး ဘာအကွောငျးမှ မရှိဘူး..”
ဘာလို့လဲ…ဆိုတော့ ငါက “အမှနျတရား ဓမ်မဘကျကနေ ရပျတညျခဲ့လို့ပါပဲ”.
ညီကိုလို ခင်ခဲ့ရတဲ့ စကစ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးက “တကယ်လို့များ အစ်ကိုနဲ့ကျနော် တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ”တဲ့..?
အရင်တုန်းက အိမ်နီးချင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ကျနော့်အပေါ်မှာလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက်လို လေးစားခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် အခုတော့ စကစမှာ စစ်ဗိုလ်ကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ (ညီအစ်ကိုအရင်းတွေလို နေခဲ့ကြတာပါ )
သူက..ကျနော်ရေးတင်နေတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဘယ်လိုဝင်ဖတ်နေသလဲ ဆိုတာကိုတော့.. ကျနော်လည်း အသေအချာမသိပါဘူး (အာဏာသိမ်းခံရအပြီး တစ်လလောက်အကြာမှာ သူ့အကောင့်ကို block ပစ်ခဲ့တယ်) ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်
အကောင့်ပြောင်းသုံးပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နေခဲ့ရပါတယ် ဒီအကောင့်ကို ကျနော်သုံးနေမှန်း သူဘယ်က ဘယ်လိုသိသွားခဲ့သလဲဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်အရေးအသားတွေကြောင့်ပါ လို့ သူက ပြောပြလာပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာရေးပုံရေးနည်းကွဲပြားလို့ ဖတ်ကြည့်တာနဲ့တန်းသိပါတယ် တဲ့လေ.. ထားပါတော့ သူက ကျနော့်ကိုမေးလာပါတယ် (ဖုန်းတော့မဆက်ပါဘူး မက်ဆေ့ပို့ပြီးမေးတာပါ)
“စစ်တပ်ကြီးကို အဲ့လောက်တောင်မုန်းတီးနေတာလား” တဲ့ ။ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် “ငါ မုန်းတာစစ်တပ်ကြီးကိုမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရူးတစ်သိုက် နဲ့
အဲ့ဒီ့ အာဏာရူးတွေခိုင်းသမျှကို မှားသလား.. မှန်သလားဆိုတာ မစဉ်းစား/မသုံးသပ်ပဲ လုပ်ပေးနေကြတဲ့ ကျွန်သဘောက်ကောင်တွေကိုပါ” လို့ သူက ဆက်ပြီး မေးပါသေးတယ် “အစ်ကို အရင်ကနိုင်ငံရေးတွေစိတ်မဝင်စားပါဘူး.. အခုမှ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး NLD ဘက်တော်သားဖြစ်သွားခဲ့တာလဲ” တဲ့..?
အရင်ကခင်မင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ်လက်ကျန်လေး နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ပြန်ဖြေခဲ့လိုက်ပါတယ် အရင်ကတည်းက ဘယ်ပါတီကိုမှ ထူးထူးခြားခြားကြီးမထောက်ခံခဲ့ဖူးပါဘူး အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးက ပါတီစွဲပြဿနာကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး
ဒါဟာ “ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကြားက တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုပါ” လို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူ မေးတာကတော့ “တကယ်လို့များ အစ်ကိုနဲ့ကျနော် တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ”တဲ့ အဲ့မေးခွန်ူကို စဉ်းစားစရာမလိုဘဲ မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်
“မင်းလုပ်စရာရှိတာကို မင်းလုပ် ငါလုပ်စရာရှိတာကို ငါလုပ်မယ် လို့၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ မင်းဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်ဖြစ် မသေဘဲ ကျန်နေခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ငါ့အနေနဲ့ကတော့ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အတွက် ငါရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လမ်းအတွက် “ဝမ်းနည်းနေမှာ မဟုတ်သလို နောင်တ ရစရာလည်း ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး..”
ဘာလို့လဲ…ဆိုတော့ ငါက “အမှန်တရား ဓမ္မဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့လို့ပါပဲ”.
ခဈြရတဲ့ ကလေးတှေ သူမကို ပူဆာလိုကျတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးကွောငျ့ အံ့အားသငျ့ပွီး ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့ရကွောငျးကို ပီတိဖွဈစှာပွောပွလာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ